शरीरमा कमजोरी महसुस भएको अवस्थामा खानुहोस यी ५ चिज Canada Nepal
क्यानाडानेपाल डेस्क भाद्र २३ २०७७
रगत देखेपछि बेहोस हुने कस्तो रोग हो ?
काठमाडौँ। कतिपय मानिसहरु रगत भन्नसाथ डराउने गर्दछन्। उनीहरुलाई रगत देख्ने बित्तिकै एक किसिमको छट्पटाहट वा उनीहरुलाई रिङ्गटासमेत लाग्ने गर्दछ। यसैगरी कोही कोही त बेहोस समेत हुने गर्छन्। उनीहरुलाई रक्तदान वा रगत परीक्षणको गर्नु भनेको एक चुनौतीपूर्ण र गाह्रो क्षण हुने गर्दछ।
उनीहरुको यस्तो व्यवहार हामी कति जनालाई अनौठो लाग्न सक्छ, तर उनीहरुको यस्तो संघर्ष वास्तविक हो । चिकित्सा क्षेत्रमा यस्तो प्रक्रियालाई ‘भासोभागल सिन्कोप’ वा ‘न्यूरोकार्डियोजेनिक सिनकोप’ भनेर चिनिन्छ जुन एक सामान्य घटना हो।
जानिराखौं आखिर किन कोहि कोहि मानिस रगत देखेपछि डराउछन् ?
सामान्यतया रगत देख्ने बित्तिकै डराउने एक प्रकारको फोबिया हो, जसलाई हेमोफोबिया भनेरपनि चिनिन्छ। संसारका १ देखि २ प्रतिशत व्यक्तिहरु यस्तो समस्याबाट पीडित छन्। यद्यपि यस फोबियाका लक्षणहरू अन्य फोबियाहरू भन्दा फरक छन्।
जब यस्ता फोबिया भएका व्यक्तिहरुले रगत देख्छन् उनीहरुको मुटुको धड्कन र रक्तचाप निकै कम हुनेगर्दछ जसले गर्दा मस्तिस्कमा रगतको प्रभाह राम्रोसँग हुँदैन र त्यस्ता व्यक्ति रगत देख्नसाथ बेहोस हुने वा उनीहरुलाई रिङ्गटा चल्ने गर्दछ। यस्तो रक्तचापको अकास्मात गिरावटलाई चिकित्सा क्षेत्रमा भासोभागल रेस्पोन्स भन्ने गरिन्छ।
चिक्तिसा क्षेत्रमा भासोभागल सिन्कोपलाई वा रगत देखेपछि बेहोस हुनु एक सामन्य विषयको रुपमा लिइन्छ, तर कहिले काहीँ रक्तचापको भारीमात्रामा गिरावटले गम्भीर असर पुर्याउन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा चिक्तिसकको आवश्यक सल्लाह वा चिकित्सकको निगरानीमा हुनु राम्रो हुन्छ।
यदि कुनै यस्तो क्षणको आफुलाई महसुस हुन्छ वा आफु बेहोस हुन लागेको थाहाहुन्छ, तब खुला ठाउँमा गई एकछिन आराम गर्नुहोस्। यस्तो अवस्थामा केहीबेर सुति आफ्नो खुट्टालाई आकाशतिर उठाउनुहोस्, जसले गर्दा यस्तो अवस्थाबाट छिट्टै निस्किन सकिन्छ।
यदि रगत परीक्षण वा वार्षिक मेडिकल जाँचको लागि जादैँ हुनुहुन्छ भने, शान्त रहनुहोस्, आफ्नो शरीरलाई आराम महसुस गराउनुहोस, यस्तो अवस्थामा धेरै आत्तिनु हुदैन । त्यसैगरी, यदि यस्तो समस्याले धेरै नै पिरोलीरहेको छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिनु अतिउत्तम हुन्छ।
आश्विन ११, २०७७ आइतवार १५:३३:०१ बजे : प्रकाशित